Mwedzi pakati-pakati-nepachinko yokumusoro iri dzinoti (kupora nguva kana akazaruka-upenyu)
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Mwedzi pakati-pakati-nepachinko yokumusoro iri dzinoti (kupora nguva kana akazaruka-upenyu)
※ neyokushandisa ave kuitika yose indasitiri vaya
nepachinko Favorite Please kureva kuti, ave zvakare vanhu vaunoziva, kukwikwidzana mune nepachinko yokumusoro iri pezana romwedzi inokurudzirwa zvikuru . Muna nepachinko yokumusoro, asi haugoni chinhu kuti chiitiko ano, kana kufananidzwa chiitiko, panofanira kuva dzakawanda zvitoro kuti nyaya yokuti payout guru, akadai chiratidzo chiitiko. In
, ichava sei nguva ape payout akadaro, achitaura kana vauye pemwedzi, munyaya zhinji mubhizimisi kuronga. Business urongwa ari nepachinko yokumusoro iri, ari zvakajairika ezvipikiri kugadziridza uye zviruva nomwedzi wokutanga, ticharamba ipapo kutanga. Panguva ino, kunyange ari pakati zvishoma, chinochengeta mari zvokuti anogona kufukidza dhefisiti.
kana, kunyange sezvo zvakare kunze dhefisiti, uyewo inobuda nguva yakakwana kusimbazve yechipiri hafu kana pakati. Saka, sezvo nepachinko yokumusoro divi, mutambo, akadai achibudisa payout guru iri here kuti ibasa yakanakisisa akanga nyore kuva pakati. In, ndizvo anouya chaiko kukura bhizimisi, asi zviri zvakare kutanga mwedzi zvichienderana chikamu, kana kubudirira kubaya mumwedzi wokutanga, iwe kudzima nguva dzose. Sezvo
zuva chete nekuti hazvina kuti yose tafura nyaya kugadziridzwa kwakadaro, kuti pfungwa mupfungwa, edza nani kuchengeta kuchigadzirisa. Chipikiri kuchinja panguva chacho, kazhinji zviri kugadziridza hwuchavapano. Ngatitii umise kuti 12,5 mm dzose chipikiri pakutanga. Muzvitoro zvakadaro, kana pane anoda kupa, kusvikira anenge 13 mm achauya akazaruka. Kutaura
rotational akurumidze, ari rotational kumhanya miniti imwe, 0. The dzinosiyana kamwe kubva 5 nguva. Mere ndomumwe musiyano, asi kana asina kubva wekushanduka, paavhareji ndechekuti haana kuuya, ndichauya siyana zvikuru Kutarisa zvachose mubhizimisi mari. Mira zvinopfuura izvi sezvo muganhu mutsetse vo, kuti ubude iri ndinoreva kuti nechepakati romwedzi. Zvadaro, makore muzvirevo munyika muhoro wako, 'That nguva inouya uyewo kubva zvakawanda vaya vanofunga kuti vanoda kuhwina. Kana chitoro uri kushandisa kutaridza
Horukon Chokwadi, zvinogona kuva zvinotapirawo iine Horukon.
nepachinko yokumusoro iri basa plan, uyewo yave zvinobatanidzwa guru pachipfuva ezvinhu vose vakadaro. Uye vakadaro, vakawanda chinangwa maziso pakati ndipo yaunoda kuyeuka kuti haisi chiitiko. Pazuva iri chiitiko ane kosi chinangwa maziso, asi kunyanya panyaya kana chiitiko chaiva dud, Saka, mazuva mashoma ndiyo imwe chinangwa maziso.
Chikonzero yakareruka, kuti tinoda kuisa pamwe mufananidzo anenge kunze asvika vatengi kurutivi yechipiri yezana romwedzi, nekuti pane kudiwa kuva kunze pano. Zendai kunyange sezvo hazvibviri, dzakadai billboard womuenzaniso, imi nezvipikiri uye anoiswa vari zhinji mashoma ichinonoka. Mune chiitiko zuva rakatevera, nezvimwewo, uye vakadaro dzakakurumbira yokutevedzera, mienzaniso kuti vari kudzvanya Nokuda mukuru kuti mukana, ndinoti kuti nyore kunzwisisa zvakanaka chinangwa maziso.
mu nepachinko parlors izvo kuenda zvachero kutamba seizvi tiri bhizimisi funga aibuda mwedzi. Kurwisa nokuchenjera ikoko mukana chokwadi, kuti zvakakosha kuti isu kumutsa mukana kuhwina. Ndizvo mufananidzo kuti tinoda kuisa, nekuti pane kudiwa kuva kunze pano. Zendai kunyange sezvo hazvibviri, dzakadai billboard womuenzaniso, imi nezvipikiri uye anoiswa vari zhinji mashoma ichinonoka. Mune chiitiko zuva rakatevera, nezvimwewo, uye vakadaro dzakakurumbira yokutevedzera, mienzaniso kuti vari kudzvanya Nokuda mukuru kuti mukana, ndinoti kuti nyore kunzwisisa zvakanaka chinangwa maziso.
mu nepachinko parlors izvo kuenda zvachero kutamba seizvi tiri bhizimisi funga aibuda mwedzi. Kurwisa nokuchenjera ikoko mukana chokwadi, kuti zvakakosha kuti isu kumutsa mukana kuhwina.